Tsy nahafaly ny minisitry ny fitsarana ny fandrenesana io tsy fanatanterahana didim-pitsarana io, ary noraisiny ho fanakorontanana sy fampisaraham-pazana ary fanosoram-potaka ny filoham-pirenena. « Inona no maha tany tan-dalàna an’i Madagasikara, raha didim-pitsarana izay efa didy raikitra no tsy ampiharina », hoy ny minisitra izay tonga tao Sambava izy ny sabotsy 21 septambra nitarika lanonana amin’ny hanorenana fonja vaovao ao an-toerana. « Ny mandray fitarainana no andraikitry ny « Bureau des doléances », dia mandinika izany ary manao tolo-kevitra », hoy hatrany ny minisitra.
« Efa nalefako any amin’ny Procureur de la République ny baiko mampisambotra ireo olona ireo ary ny hampidirana azy am-ponja fa manao « entrave à la justice ». Heloka izany tsy fanatanterahana didy izany », hoy ny ny minisitra Randrianasolo Jacques tamin'ny teny hentitra.